Ebe bụ Best Ọnọdụ N'ihi foodies Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Ebe bụ Best Ọnọdụ N'ihi foodies Na Europe
Ebe bụ Best Ọnọdụ N'ihi foodies Na Europe
Train Travel Austria, Train Travel Denmark, Train Travel France, Inzọ Njem Italytali, Ingbọ ologo Spain, Travel Europe
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 23/10/2020)
Nri dị ya dị ebube, karịsịa nri na-atọ ụtọ. Ọ bụ ya mere mfe ịbụ ekwe ihe ya mgbe bi na Europe na-enye gị nke ukwuu kpatara ya! The kasị mma obodo foodies nọ Europe, atụkwasị anyị obi anyị foodies nakwa, na otú ị ga-mgbe ị na-na na site na nke a blog! dị nnọọ, agụ nke ọma.
Ebe a bụ a nhọrọ nke kacha mma obodo foodies na Europe na i nwere ike iru ụgbọ okporo ígwè:
Onye ọ bụla maara na ọ dị ugbu a, - ma ọ bụrụ na ị na-aga Europe na-ada na ịhụnanya, ị na- aga France. Little ị maara ezie na ị na-aga France na-ada na ịhụnanya na ya eateries, dị ka nke ọma! Na a obodo ama n'ihi na ya ịhụnanya nke ihe oriri na-akwadebe ya, ọ bụ ihe siri ike iji bulie a mmasị ebe-eri. N'eziokwu, ezie – Lyon bụ otu n'ime France si n'elu foodie ebe inyocha! anyị nkwanye: sliced ​​salami rosettes jere ozi na ọhụrụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ cornichon pickles na Kpekere. Lyon jikọọ na Switzerland site okporo ígwè otú i nwere ike mgbe niile gbapụta n'elu ka a "chocolate obodo"Maka a ụtọ nri imecha.
Lyons ọkọkpọhi n'ime anyị n'usoro nke Best Ọnọdụ maka foodies na Europe maka ya chocolate utọ na ndị ọzọ.
London ka Lyon Ụgbọ oloko
Amsterdam na Lyon Ụgbọ oloko
The buzzing obodo nke Vienna bụ ebe ị na-aga n'ihi na nke kacha mma chocolate achicha ke Europe - Sachertorte. Ọgaranya na uto, ọchịchịrị na nke miri emi, N'ihi nke a, anyị achicha ọkachamara ọdịda Austria na-otu nke Best Ọnọdụ maka foodies na Europe. ka ebe-ahụ na otu? Na ọ bụla nke Vienna kọfị ụlọ! Nke a bụ mba signature achicha, na ndị obodo jide n'aka na ị maara na ọ bụ ya mere.
IHE: Snap a ole na ole foto nke obodo ahụ na nri ha mgbe e – ị chọrọ mee ka gị na Instagram na-enwu, ime bụghị ya?
Mgbe ị na-eche dị ka ọkụkụ niile kasị mma na ndị ọzọ na obodo, dị nnọọ iri nri na San Sebastian! Ikwu eziokwu, i nwere ike iri tapas n'ebe ọ bụla Spain, na ị ga-hụrụ ya n'anya. MA, na nke kacha mma nke kasị mma, na-agbalị ya na a seaside obodo. Gịnị na-eme ebe a otú ahụ pụrụ iche bụ isi nso nke flavors na nkà i nwere ike ịhọrọ site na. Oseose na utoojoo, na-ekpo ọkụ na oyi na-atụ, jide na ọkaibe, na-niile a chọtara otu mmanya. Gbalịa a ole na ole iberibe n'ebe nke ọ bụla ị na-ahụ. Ị ga-juputara, ma ọ ga-adị oké ọnụ ahịa ya.
Ee, ụgbọ okporo nri na-adị ịtụnanya ma ọbụna nke kacha mma ụgbọ okporo nri -eji tụnyere Copenhagen si ma ọ bụ! bụ ogidi ọkụ nke Nordic nri, na ị ga-eme ihe niile i nwere ike ime iji na-aga lelee ya. Ọ bụghị nanị na nke a na otu onye bụ otu n'ime Best Ọnọdụ maka foodies na Europe, eatery has been the No. 1 ntụpọ na San Pellegrino ndepụta maka afọ! Ee, ndị ahịa na-elu, ma uto ị na-na-bụ uru ọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ gbapụta ka Scandinavia ụgbọ okporo ígwè, Copenhagen bụ oké ọnụ ụzọ ámá na-akwụsị na-eme nnọọ nke ahụ.
Bonn na Copenhagen Ụgbọ oloko
Hanover na Copenhagen Ụgbọ oloko
Frankfurt na Copenhagen Ụgbọ oloko
anyị akara our list of Best Cities for Foodies with Trieste, Italy
Anyị nwere ike dee banyere Best Ọnọdụ maka foodies na Europe enweghị banyere niile deliciousness of Italy. Ọfọn ... bụghị ihe niile ma ọ dịkarịa ala ụfọdụ.
Trieste bụ Austria na Hungarian Empire ruo mgbe Agha Ụwa Mbụ. Eziokwu a na-ebe a na-agbakwụnye na pụtara Trieste si atọ ụtọ efere. Gịnị? N'ihi Trieste akụkọ ihe mere eme ekpe a ọkpụrụkpụ mmetụta na ya nri. Atypical of ahụkarị Italian efere, Trieste prides dị otú ahụ weird combos of pasta na Pizza n'akụkụ sauerkraut na sliced ​​soseji, na yiri. Enwe ọmarịcha nri, creamy chocolate, na fabulous kọfị na obodo ebe James Joyce malitere ekewetde Ulysses. A pụtara echiche gafee Adriatic agaghị egbu gị agụụ, ma. Njikọ dị n'etiti Italy na Slovenia zuru okè site okporo ígwè, otú i nwere ike inye Slovenia a ohere mgbe na obi.
Genoa ka Trieste Ụgbọ oloko
Rome ka Trieste Ụgbọ oloko
Milan ka Trieste Ụgbọ oloko
Florence na Trieste Ụgbọ oloko
History, nri, na Europe na-aga aka na aka, na gị ugbu a nwere ohere inyocha ya niile nnọọ mfe. Tinye Zọpụta a Train ịzụta onwe gị a okporo ígwè tiketi na-amalite gị foodie njem taa!
Ị chọrọ Embed anyị blog post gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-foodies-europe%2F - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / fr na / de ma ọ bụ / es na ndị ọzọ asụsụ.